Atemmufo 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Danfo kɔhwehwɛɛ asaase (1-31)
Wɔfaa Mika ahoni ne ne sɔfo no kɔe (14-20)
Wɔko faa Lais, na wɔtoo hɔ din Dan (27-29)
Danfo som bosom (30, 31)
18 Saa bere no, na ɔhene biara nni Israel.+ Na saa nna no mu no, na Dan abusuakuw+ no rehwehwɛ baabi atena,* efisɛ ɛde besi saa bere no, na wonnyaa agyapade biara wɔ Israel mmusua no mu.+ 2 Enti Danfo no somaa wɔn abusua no mu mmarima akokodurufo baanum fii Sora ne Estaol+ sɛ wonkokyinkyin asaase no so nhwɛ sɛnea ɛte. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ, munkokyinkyin asaase no so.” Bere a wokoduu Mika fi wɔ Efraim mmepɔw mu no,+ wɔdaa hɔ maa ade kyee. 3 Bere a wɔbɛn Mika fi no, wɔtee Lewini aberante no nne,* enti wɔkɔɔ ne nkyɛn kobisaa no sɛ: “Hena na ɔde wo baa ha? Woreyɛ dɛn wɔ ha? Ɛdɛn na agye wo aka ha?” 4 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛɛ ne sɛɛ na Mika yɛ maa me, na wabɔ me paa sɛ menyɛ ne sɔfo.”+ 5 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, bisa Onyankopɔn ma yɛn na yenhu sɛ ɔkwan a yɛrekɔ no besi yɛn yiye anaa.” 6 Na ɔsɔfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa asomdwoe nkɔ. Yehowa ka mo ho wɔ mo akwantu no mu.” 7 Enti mmarima baanum no siim kɔe, na wokoduu Lais.+ Wohui sɛ nkurɔfo no nhia biribiara mfi obiara hɔ te sɛ Sidonfo no. Ná wɔte hɔ dwoodwoo a wonnwen sɛ bɔne bi bɛto wɔn,+ na na otirimɔdenfo biara mmaa asaase no so mmɛteetee wɔn. Ná wɔne Sidonfo ntam ware, na na wɔne obiara nni nkitaho. 8 Bere a wɔsan baa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Sora ne Estaol+ no, wɔn nuanom no bisaa wɔn sɛ: “Ɛkɔɔ dɛn?” 9 Ɛnna wɔkae sɛ: “Momma yɛnsɔre nkɔtow nhyɛ wɔn so, efisɛ yɛakohu sɛ asaase no ye. Mote hɔ retwɛn dɛn? Monnsɛe bere; monkɔfa asaase no. 10 Sɛ mudu hɔ a, mubehu sɛ nkurɔfo no te hɔ a wonnwen sɛ bɔne bi bɛto wɔn,+ na asaase no so paa. Onyankopɔn de ahyɛ mo nsa, na biribiara a mopɛ wɔ asaase so biara, mubenya bi wɔ hɔ.”+ 11 Afei Dan abusuakuw no mu mmarima 600 a wɔde akode ahyehyɛ wɔn ho siim fii Sora ne Estaol kɔe.+ 12 Wɔforo kɔɔ Kiriat-Yearim+ wɔ Yuda, na wɔkɔkyekyee asoɛe wɔ hɔ. Enti wɔtoo hɔ din Mahane-Dan,*+ na saa na wɔfrɛ hɔ de besi nnɛ. Ɛwɔ Kiriat-Yearim atɔe fam. 13 Wofi hɔ kɔɔ Efraim mmepɔw mu, na wokoduu Mika fi.+ 14 Ɛnna mmarima baanum a wɔkɔhwɛɛ Lais asaase no+ ka kyerɛɛ wɔn nuanom no sɛ: “Munim sɛ efɔd* ne terafim ahoni* ne ohoni a wɔasen ne dade honi*+ wɔ saa afi yi mu? Mo ara monhwɛ nea mobɛyɛ.” 15 Enti wogyinae wɔ hɔ, na wɔkɔɔ Lewini aberante no+ fi wɔ Mika fi hɔ, na wobisaa no sɛnea ne ho te. 16 Saa bere no nyinaa, na Danfo mmarima 600+ a wɔde akode ahyehyɛ wɔn ho no gyinagyina ɔpon no ano. 17 Na mmarima baanum a wɔkɔhwɛɛ asaase no+ wuraa ofie hɔ sɛ wɔrekɔfa ohoni a wɔasen ne efɔd+ ne terafim ahoni*+ ne dade honi*+ no. (Saa bere no, na ɔsɔfo no+ ne mmarima 600 a wɔde akode ahyehyɛ wɔn ho no gyinagyina ɔpon no ano.) 18 Na wɔkɔɔ Mika fi hɔ kɔfaa ohoni a wɔasen ne efɔd ne terafim ahoni* ne dade honi* no. Ɛnna ɔsɔfo no bisaa wɔn sɛ: “Ɛdɛn na moreyɛ yi?” 19 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ komm. Fa wo nsa to w’ano, na wo ne yɛn nkɔ, na yɛmfa wo nyɛ yɛn papa* ne yɛn sɔfo. Wohwɛ a, sɛ́ wobɛyɛ ɔsɔfo ama onipa baako fi+ ne sɛ wobɛyɛ ɔsɔfo ama abusuakuw ne abusua bi wɔ Israel, nea ɛwɔ he na eye?”+ 20 Enti ɔsɔfo no penee so, na ɔfaa efɔd ne terafim ahoni* ne ohoni a wɔasen no,+ na ɔne nnipa no kɔe. 21 Afei wosii kwan so toaa wɔn akwantu no so, na wɔmaa mmofra, wɔn nyɛmmoa, ne wɔn agyapade dii wɔn anim. 22 Bere a wofi Mika fi kɔɔ akyiri kakra no, mmarima a wɔtete afi a ɛbɛn Mika fi no behyiae, na wɔtaa Danfo no kɔtoo wɔn. 23 Bere a wɔteɛɛm frɛɛ Danfo no, wotwaa wɔn ani hwɛɛ wɔn, na wobisaa Mika sɛ: “Ɛyɛ dɛn asɛm? Ɛdɔm bebrebe yi nso ɛ?” 24 Ɛnna ɔkae sɛ: “Moafa m’anyame a mayɛ, na ɔsɔfo no nso mode no kɔ. Moafa me biribiara. Enti adɛn nti na moresan abisa me sɛ, ‘Ɛyɛ dɛn asɛm?’” 25 Ɛnna Danfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Nteɛteɛm ngu yɛn so. Anyɛ saa a, mmarima a wɔn bo afuw* no bɛtow ahyɛ mo so, na wobekum wo* na wɔakum wo fifo nso.”* 26 Enti Danfo no toaa so kɔɔ wɔn kwan. Bere a Mika hui sɛ wɔn ho yɛ den sen no no, ɔsan n’akyi kɔɔ ne fi. 27 Bere a wɔfaa nneɛma a Mika ayɛ, ne ne sɔfo no, wɔkɔɔ Lais,+ baabi a na nkurɔfo no te hɔ dwoodwoo a wonnwen sɛ bɔne bi bɛto wɔn no.+ Wɔde sekan kunkum wɔn, na wɔde ogya hyew kurow no. 28 Obiara nni hɔ a na obegye wɔn, efisɛ na kurow no ne Sidon ntam ware, na na wɔne obiara nni nkitaho. Afei nso, na kurow no da Bet-Rehob+ asaasetraa no so.* Na Danfo no san kyekyee kurow no tenaa mu. 29 Afei wɔde kurow no too wɔn papa Dan+ a Israel woo no no, enti wɔfrɛɛ hɔ Dan.+ Nanso kan no de, na wɔfrɛ kurow no Lais.+ 30 Ɛno akyi no, Danfo no de ohoni a wɔasen+ no sii hɔ fae. Na Yonatan+ a ɔyɛ Mose ba Gersom+ ba no ne ne mma bɛyɛɛ Dan abusuakuw no asɔfo kosii da a wotuu nnipa a wɔtete asaase no so kɔe. 31 Enti wɔde Mika honi a wɔasen no sii hɔ, na bere a nokware Nyankopɔn no fi da so wɔ Silo+ no nyinaa, na ɛwɔ wɔn nkyɛn.
^ Nt., “agyapade atena so.”
^ Anaa “sɛnea Lewini aberante no kasa.”
^ Ɛkyerɛ, “Dan Asoɛe.”
^ Anaa “abusua abosom; ahoni.”
^ Anaa “ohoni a wɔagu.”
^ Anaa “yɛn fotufo.”
^ Anaa “mmarima a wɔn kra bo afuw.”
^ Anaa “wobɛhwere wo kra.”
^ Anaa “wo fifo nso bɛhwere wɔn kra.”
^ Anaa “obon no mu.”